June 2020 – အခါပေး ဗေဒင်
[gallery ids=”26665,26666,26667,26668″ type=”rectangularေ KP ဟူးရားဇာတာနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ၁၀-တန့် CSL က ရာဟုဖြစ်ပြီး ၂-တန့် (ဝင်ငွေဘာဝ)မှာရပ်ကာ၊ ၁၁-တဘဘာဝ)မှာရပ်တဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပိုင်နက္ခတ်ကိုစီးထားပြီး၊ ၂-တန့်မှာရပ်တဲ့ ၁-နွေSub ကို စီးထားလေတော့ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ပြွီေ … More
(Online ​ပေါ်တွင်​ ကြိုတင်​​ဟောခဲ့​သော ​ဟောကိန်းများစာရင်း။) 1. Release of Myanmar Seafarers from Somalia Pirates (24-Jan-2011) (https://akharpaybaydin.wordpress.com/2011/01/24/release-of-myanmar-seafarers-from-somalia-pirates/) 2. AFC Cup (Myanmar Vs Malaysia) … More
တား​ရော့နိမိတ်​ပုံအရ​တော့ လူ​တွေအဓိက ပိတ်​မိ​နေတဲ့ ပုံပါပဲ…။ ကဒ်​အရ​တော့ ဒီ​နေ့ကစ ၂၁-ရက်​​လောက်​မှ ထိန်းချုပ်​နိုင်​မယ့်​သ​ဘောပါ…။ According to the omen of the card, it is assumed that the … More
အီရန်​အ​နေနဲ့ စစ်​ဖြစ်​ဖို့​နေ​နေသာသာ လှုပ်​လို့​တောင်​ရမှာ မဟုတ်​ပါဘူး…။ (FB ပေါ်တွင် ကြိုတင်ဟောခဲ့သောပို့စ် ဖြစ်ပါသည်။) Sayar Zar Ni 09 2500 61346 (Unicode) အီရနျအနနေဲ့ စဈဖွဈဖို့နနေသောသာ လှုပျလို့တောငျရမှာ မဟုတျပါဘူး…။
” အုတ်​မြစ်​ချမင်္ဂလာ” အခါဇာတာ( ” အုတျမွဈခမြင်ျဂလာ” အခါဇာတာ)
ဂဇ​ကေသရီယုဂ်​၊ ဓနယုဂ်​၊ ရာဇယုဂ်​များဖြင့်​ ရှမ်းပြည်​နယ်​တွင်​ မကြာမီ​ဆောက်​လုပ်​​တော့မည့်​ အ​ဆောက်​အဦးသစ်​အတွက်​ ” အုတ်​မြစ်​ချမင်္ဂလာ” အခါဇာတာ…။ (Unicode) ဂဇကသေရီယုဂျ၊ ဓနယုဂျ၊ ရာဇယုဂျမြားဖွငျ့ ရှမျးပွညျနယျတှငျ မကွာမီဆောကျလုပျတော့မညျ့ အဆောကျအဦးသဈအတှကျ ” အုတျမွဈခမြင်ျဂလာ” အခါဇာတာ…။
ဆရာကြီးဦးမြင့်​စိန်​၏ ပို့ချချက်​ဖြစ်​တဲ့ “စီးပွား​ရေးနဲ့ပတ်​သက်​ရင်​ ၁၀-တန့်​ဘာဝသခင်​ဂြိုဟ်​စီးတဲ့ နဝင်းသခင်​ဂြိုဟ်​ရဲ့ပရိယာယ်​အတိုင်းဟော​လေ…” ဆိုတဲ့အတိုင်း- ဒီဇာတာမှာ ၁၀-တန့်​ဘာဝသခင်​ဂြိုဟ်​သည်​ ၆-ကြာဂြိုဟ်​ဖြစ်​ပြီး ၂-င်္လာနဝင်းကိုစီးထားကာ ၂-င်္လာဂြိုဟ်​ရဲ့ အမြင်​ကိုခံထားရပါတယ်​…။ နဝင်းဇာတာမှာ ၂-င်္လာနဲ့ ၆-ကြာတို့ အိမ်​ချင်းလဲရပ်​ထားတာကလည်း စိတ်​ဝင်​စားစရာ​ကောင်းပါတယ်​…။ ၂-င်္လာ​ရော၊ ၆-ကြာဂြိုဟ်​​တွေက အာ​ပေါဂြိုဟ်​လို့​ခေါ်တဲ့ … More